Ndima yeHaitian Creole muDominican Republic | Bhuku Regore ra2015
Kutanga Ndima Yemutauro wechiHaitian Creole
Vanhu vakawanda vari kugamuchira chokwadi mundima yemutauro wechiSpanish. Zvisinei, kubvira kare, vanhu vanotaura mimwe mitauro vaitamira munyika yacho uye vaigamuchirawo mashoko edu anopa tariro. Mutauro unonyanya kushandiswa muHaiti, iyo yakavakidzana neDominican Republic, ndewechiHaitian Creole. Kunyange zvazvo pachimbova nekusawirirana pakati peDominican Republic neHaiti, zviuru zvevanhu vekuHaiti zvinoshanda muDominican Republic, uye vanhu vacho vakawedzera chaizvo munguva shoma yapfuura.
Kwemakore, vanhu vanotaura chiHaitian Creole avo vainge varatidza kufarira chokwadi vaikurudzirwa kuti vapinde neungano dzechiSpanish. Zvisinei, kuti vanhu ivavo vabatsirike pakunamata, muna 1993 Dare Rinodzora rakaita kuti bazi reGuadeloupe rikumbire mapiyona chaiwo aiva munyika iyoyo kuti anoshumira mundima yemutauro wechiHaitian Creole muDominican Republic. Varume vatatu nemadzimai avo vakazvipira kutamira ikoko, uye pakati pavo paiva naBarnabé naGermaine Biabiany. Barnabé anoti: “Pakutanga taingova nemabhurocha maviri chete muchiHaitian Creole. Zvimwe zvinyorwa zvese zvaingova muchiFrench, saka taifanira kuzvishandura zvese kubva muchiFrench kuenda muchiHaitian Creole.”
Muna January 1996, muHigüey maiva nevaparidzi 9 uye muSanto Domingo maiva ne10 vaida kutsigira boka reHaitian Creole. Saka muguta reHigüey makatangwa boka uye muSanto Domingo makatangwa rimwewo. Nekufamba kwenguva mapoka acho akazova ungano. Zvisinei, ungano idzodzo dzakazovharwa, nekuti zvaiita sekuti vanhu vekuHaiti vaifarira kudzidza chiSpanish saka vaisarudza kupinda neungano dzechiSpanish. Barnabé anoti: “Takakurukura nehama dzaishanda muDhipatimendi Rebasa kubazi, uye zvaiita sezvakanaka kuti timbomira kushanda ndima yeHaitian Creole.”
Ndima yeHaitian Creole Inosimudzirwazve
Muna 2003, Dare Rinodzora rakatumira Dong naGladys Bark kuti vanoshanda semamishinari mundima yeHaitian Creole muDominican Republic. Vakashanda kwemakore maviri muHigüey uye vakatanga kuona kubudirira kwebasa racho. Musi wa1 June 2005, ungano yeHaitian Creole yakatangwa. Dong Bark, Barnabé Biabiany, nemumwe mumishinari anonzi Steven Rogers, vakatenderera nenyika yacho yose vachikurudzira vanhu kuti vatsigire ndima yeHaitian Creole.
Basa rakafambira mberi zvakanaka uye dzimwe ungano dzakatangwa. Musi wa1 September 2006, dunhu rekutanga reHaitian Creole rakaumbwa. Maiva neungano nomwe nemapoka maviri uye Barnabé Biabiany ndiye aiva mutariri wedunhu racho.
Mumakore akatevera, mamwe mamishinari akati kuti akatumirwa kuDominican Republic kuti anoshanda mundima yeHaitian Creole. Uyewo, vamwe vakawanda vakasvika vachibva kuCanada, Europe, United States, nedzimwewo nyika kuti vabatsire. Boka rehama dzaikwanisa rakapiwa basa rekugadzira kosi yemutauro weHaitian Creole kuitira hama nehanzvadzi dzekune dzimwe nyika uye dzemunyika imomo.
Vakawanda vanoti vanhu vanotaura chiHaitian Creole asi vasiri vekuHaiti vanofanira kunge vari Zvapupu zvaJehovha
Vanhu vakabva kuHaiti vari kubatsirwa chaizvo nokuti vakawanda vemuDominican Republic vari kuedza nepavanogona napo kuti vadzidzire Haitian Creole. Iye zvino, muparidzi ari chizvarwa chemuDominican Republic paanotsanangura chokwadi cheBhaibheri nechiHaitian Creole, zvishoma nezvishoma waari kutaura naye anonzwa akasununguka zvekuti vanokwanisa kukurukura mashoko oUmambo. Vakawanda vehama dzedu vakadzidza chiHaitian Creole zvekuti kana vakawanda vakanzwa munhu asiri wekuHaiti achitaura mutauro wacho vanobva vangofunga kuti mumwe weZvapupu zvaJehovha.
Kuti tinyatsoona zvinogona kuitika kana tikafarira vanhu vemumwe mutauro, ngatifungei zvakaitika kune imwe hanzvadzi inopayona iri chizvarwa chemuDominican Republic yakapinda kosi yekudzidzira chiHaitian Creole. Payaiva muushumiri, yakaona mumwe murume nemudzimai vekuHaiti vaifarira. Yakazodzokera kuti itange chidzidzo cheBhaibheri. Hanzvadzi yacho inoti: “Pandakasvika ndakakwazisa mudzimai wacho ndichimutsvoda padama setsika inoitwa nevakadzi muDominican Republic. Mukadzi wacho akatanga kuchema. Ndakamubvunza kuti, ‘Ko chii?’ Iye ndokuti, ‘Kwemakore ose andagara munyika muno, aka ndekekutanga kukwaziswa nemumwe munhu achinditsvoda.’”
Jehovha akakomborera kushanda nesimba kwaiitwa mundima iyi zvekuti pakava nekuwedzera kunoshamisa. Pakazosvika 1 September 2009, mainge mava neungano 23 dzeHaitian Creole uye mapoka 20, saka dunhu rechipiri rakaumbwa. Nhamba yevakapinda Chirangaridzo muna 2011 yakaratidza kuti Zvapupu zvaigona kuzowedzera. Semuenzaniso, vaparidzi 11 vaiva mutaundi duku reRío Limpio vakafara chaizvo vanhu 594 pavakapinda Chirangaridzo. Uye pakaitwa urongwa hwekuti Chirangaridzo chiitirwe mutaundi rainge risina vaparidzi reLas Yayas de Viajama, vanhu 170 vakapinda Chirangaridzo. Pakazosvika September 2011, ndima yeHaitian Creole yakanga yava neungano 33 uye mapoka 21. Nokudaro, rimwezve dunhu rakaumbwa muna 2012.
Bazi reDominican Republic rakashanda pamwe chete nereHaiti pakudzidzisa hama dzemunyika dzacho. Makirasi mashanu eChikoro cheBhaibheri Chehama Dzisina Kuroora uye mana eChikoro cheBhaibheri chevaKristu Vakaroorana akaitwa muchiHaitian Creole.
Kudzidza chiHaitian Creole
Kukura Kuri Kuita Ndima yeHaitian Creole
Kubva muna 2005 kusvika muna 2014